Nka na ụzụ - Shandong New Ankai-Kitco Co., Ltd
Swiss CNC lathe usoro
Kwụ Gbanwere CNC lathe Series
Vetikal igwe CNC lathe Series
The ọhụrụ NC Ankai na-mgbalị ịme mba ọzọ technology, ọkachamara na mmepụta nke elu-ọgwụgwụ CNC igwe ngwaahịa na-aga, elu rigidity, ezi kwụsie ike.
The ụlọ ọrụ enwetara a zuru set of Technology South Korea HJM ụlọ ọrụ, na ẹdude otu spindle, atọ axis linkage akara nke atọ eluigwe na ala CNC vetikal lathe-egwe ọka mgbagwoju igwe usoro ngwaahịa; nwekwara elu-ọkwa CNC lathe-egwe ọka mgbagwoju igwe abụọ spindle, asaa axis linkage anọ, na kacha ókè izute mkpa nke dị iche iche ọrụ.
NC na-mgbalị iji ngwaahịa: karịsịa kwesịrị ekwesị n'ihi na akpakanamde, ngwá electronic, nkwukọrịta, IT ụlọ ọrụ, ọgwụ na ahụ ike, ụgbọelu, agha, ngwaike, n'ibu na haịdrọlik akụkụ ụlọ ọrụ na nnukwu quantities, elu kpọmkwem, obere mgbagwoju akụkụ nhazi, na kacha clamping mkpanaka ihe dayameta 38mm, nwere ike isi nweta 24 awa nke unattended mmepụta.
The igwe jiri mere elu na-agba CNC usoro, elu wuru na-spindle na-ewu na-elu mkpebi encoder, akụkụ layout, elu àgwà na ihe ezi uche (dị ka biarin, bọl ịghasa, linear ndu na-dị ika-aha ngwaahịa), ọkaibe n'ichepụta, factory nnyocha site mba ọzọ elu ụkpụrụ, otú ahụ ngwaahịa iru mba elu na larịị nke.
High tech, elu amalite, elu àgwà bụ ebighị ebi ịchụso ọhụrụ Ankai, Ankai ọhụrụ ndị mmụọ nke "àgwà mbụ, ọrụ oru oma, na-asụ ụzọ na mmụọ nsọ na-eche, ezi obi na-na ahịa na nkịtị development.
CNC igwe ngwaahịa atụmatụ:
1, elu rigidity: dum igwe bụ ubé arọ, nke na-gụnyere ke idem mgbatị mgbidi ọkpụrụkpụ, ihe ji nke ndu okporo ígwè, wdg na rigidity na expansibility nke igwe ngwá ọrụ na-ike, arọ ọnwụ bụ ndị ọzọ elu igwe ngwaọrụ , na nwere doro anya uru na nhazi ígwè, alloy ígwè, igwe anaghị agba nchara ihe onwunwe na na.
2, elu kwụsie ike: ndu na-adịru ahụ gbasara, isi breeki / countershaft mgbe indexing kpochidoro ngwaọrụ, mma nke kwụsiri ike nke workpiece.
3. The FANUC - a usoro nke mpụta ike ngwá ọrụ moto na-eri nri moto bụ n'ọkwá ka nke beta usoro.
1) Alfa usoro bụ ndị kasị elu FANUC moto, na ya nkenke, arụmọrụ na ndụ dị mma karịa beta usoro.
2) ọ dịghị okpomọkụ nchọpụta na beta usoro moto. The moto na usoro ga-emebi mgbe okpomọkụ nke moto enwekwu nọgidere mgbe ibu bụ na-aga n'ihu ma ọ bụ ibu bụ nnukwu.
3) anyị isi aro, servo ampilifaya iji Alfa usoro (FANUC, na kasị elu) na spindle, transverse ampilifaya na-kewaa, beta usoro dị ka akụ na ụba ụdị ampilifaya, na price bụ ala karịa Alfa series, na isi aro, transverse ampilifaya bụ otu ihe ụdị, na mbubreyo mmezi na nnọchi niile nnọchi na mmezi-akwụ ụgwọ kwesịrị elu karịa beta usoro anyị ụlọ ọrụ na-onwem na Alfa moto SM205. The torque nke Alfa moto, na nkenke nke nzaghachi, mkpebi nke encoder, na nke ugbu a nchọpụta ka anyị nnọọ ike na beta moto.
4, elu ọsọ, elu nkenke na elu arụmọrụ: kasị mma ngwá ọrụ layout na-achịkwa elu ọsọ som ọrụ, nke mere na ngwá ọrụ na-agbanwe agbanwe oge bụ nke kasị nso na mma ebe a na-enweta n'otu oge, na inyeaka oge na-ebelata ka nke kasị nso.
5, elu nhazi: kasị lekwasị ọtọ mmiri, multi axis ọgaranya ngwá ọrụ nhazi, na ọkọlọtọ ike ngwaọrụ, nke ukwuu ahụ gbasara nhazi akporo na zutere mgbagwoju machining nke mgbagwoju akụkụ.
6, adaba na ime uwa: adaba ọrụ ohere, mfe ịgbanwe mma, vetikal n'ala ngwá ọrụ ike inweta ihe kasị mma mgbawa.
7, elu mgbanwe: ya nwere ike ọfiọk na ma ọ bụ na-enweghị ndu bushing ngakorita, ike ngwaọrụ nwere ike onwem na ngwa ngwa mgbanwe eri ifufe-egwe ọka, ike isi, VDI cutter, mgbawa remover, mmanụ alụlụ mkpoko, waya extrusion wheel, elu nsogbu mgbapụta na ndị ọzọ ngwaọrụ.
Okwu: Fuhai Road, Han Dian Town, Zouping County, Shandong
Gịnị bụ uru nke swiss CNC machin ...
Olee otú a obere space akara ije m ...
The ọhụrụ CNC igwe ngwá ọrụ azụmahịa netwọk ...
The ọhụrụ atụmatụ nke Ankai ịkpachapụ
The ọhụrụ SC385 SM203 igwe, Ankai succes ...